तालाबन्दी संस्कृति बन्द गरौं
मुख्य पृष्ठपत्रपत्रिकामा आजतालाबन्दी संस्कृति बन्द गरौं
विराटनगर । प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन एवं सामाजिक विकासमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले तालाबन्दी गरेर विश्वविद्यालय बलियो नबने बताएका छन् ।
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको २७ औं वार्षिकोत्सव समारोहका अवसरमा आइतबार बोल्दै मन्त्री कार्कीले विभिन्न बहाना बनाएर विश्वविद्यालयलाई आन्दोलनको थलो बनाउने र तालाबन्दी गरेरमात्रै समस्याको समाधान खोज्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने बताए । मन्त्री कार्कीले प्राज्ञिक क्षेत्रको थलो मै तालाबन्दी भइरहने कुराले विश्वविद्यालयको साख घटाएको भन्दै कुनैपनि समस्याको समाधान वार्ता र सम्वादबाट गर्न सुझाव दिए ।
विश्वविद्यालयभित्रको आन्तरिक खिचातानी र स्वार्थ समुहका कारण २७ वर्षसम्म पनि उचित विकास हुन नसकेको उनको गुनासो थियो । मन्त्री कार्कीले विश्वविद्यालयभित्र राजनीतिलाई जबरजस्ती प्रवेश गराउने कार्य रोकिए सहि दिशामा अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
वार्षिकोत्सव समारोहका अध्यक्ष एवं विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा यादवराज कोइरालाले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिकभन्दा प्राज्ञिक थलोका रुपमा मात्रै आफुले हेरेको बताए । वार्षिकोत्सवका अवसरमा राष्ट्रियसभा सदस्य गोपी अछामी, प्रथम परीक्षा नियन्त्रक कविराज न्यौपाने, स्कुल आफ हेल्थ साइन्सकी क्याम्पस प्रमुख कविता अधिकारी, परीक्षा नियन्त्रक प्रा.डा. सूर्यप्रसाद संग्रौला, प्राध्यापक संघका सभापति डा.सन्देशदास श्रेष्ठ, कर्मचारी संघका सभापति राजकुमार सापकोटालगायतले शुभकामना दिएका थिए ।
सो अवसरमा विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक तथा प्रथम परीक्षा नियन्त्रक कविराज न्यौपानेलाई दोसल्ला र सम्मान पत्रका साथ विशेष सम्मान गरिएको छ । त्यस्तै विश्वविद्यालयमा २० वर्षे सेवा अवधि पुरा गरेका प्रा.डा. पवनकुमार झा, सहप्राध्यापक रामप्रसाद ढकाल, मुख्य अधिकृत जनकमणि तिम्सिना, अधिकृत पर्वतराज न्यौपाने, मुख्य सहायक निरोद सुवेदी र मुख्य कार्यालय सहयोगी कोपिला खड्कालाई सम्मान गरिएको छ । सोही अवसरमा विश्वविद्यालयका विभिन्न कार्यालय र विभागमा रहेर उत्कृष्ट काम गर्ने १९ जना कर्मचारी तथा प्राध्यापकहरुलाई उत्कृष्ठ सेवा पदक प्रदान गरिएको छ ।
विश्वविद्यालयले २७ वर्षपछि आफ्नो २७ औं वार्षिकोत्सव आफ्नै सम्पत्ती तथा भवनसहितको कार्यालय परिसर मोरङको सुन्दरहरैंचास्थित गोठगाउँमा सम्पन्न गरेको छ । २७ वर्ष अगाडि स्थापना भएको उक्त विश्वविद्यालयको आवश्यक भौतिक संरचना नहुँदा विराटनगरमै केन्द्रीय कार्यालय रहँदै आएको थियो र त्यसखालका कार्यक्रम पनि विराटनगरमै हुँदै आएका थिए । विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय गोठगाउँमा सार्नुपर्ने माग त्यहाँका स्थानीयको प्रमुख एजेण्डा थियो । आफूहरुको उक्त एजेण्डा पूरा भएको भन्दै सुन्दर हरैंचा नगरपालिकाका प्रमुख शिव ढकालले खुसी व्यक्त गरे ।
नगरपालिकाले गोठगाउँचोकदेखि विश्वविद्यालयसम्मको सडक यसैवर्ष कालोपत्रे गर्ने योजना बनाएको छ । प्रमुख ढकालले ढुक्क भएर काम गर्न विश्वविद्यालयको नेतृत्वलाई आग्रह गरे । हाम्रोमत दैनिकमा समाचार छ
तालाबन्दी पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय वार्षिकोत्सव